PaMacOS, iwe unogona kuwedzera iyo inotora kuti zvive nyore kuona nekungozunza mbeva yako. Windows 10 zvakare inobvumira vashandisi kuti vawane iyo inotora pane desktop nekudzvanya iyo Ctrl kiyi, iyo iwe yaunogona kugonesa uye kudzima kubva kune yekuwanika marongero egonzo.
Zvichienderana nemhinduro kubva kune vanofarira tekinoroji, Microsoft ikozvino iri kuongorora chiitiko chitsva chePowerToys icho chichagonesa "Mac Style" Tsvaga cursor "nyore kuwana (zunza kuwana)".
Kune avo vasingazive, PowerToys, iri rakavhurika-sosi suite yesoftware maturusi akagadzirwa neMicrosoft kusimudzira iyo Windows 10 ruzivo uye kusimudzira kugadzirwa kwako nezvinhu zvinonyanya kubatsira, senge hombe faira renamer, image optimizer, uye Windows Kutsvaga-senge kuvhura.
Vagadziri veMicrosoft vava ikozvino kufunga ficha nyowani inoita kuti zvive nyore kwauri kuti uwane iyo mbeva pointer / chinongedzo.
Kana chimiro ichi chikatumirwa neinotevera PowerToys kugadzirisa, iwe unozogona kutsvaga yako mbeva kana trackpad pointer pamwe nekhibhodi nzira kana nekuzunza mbeva yako.
Injiniya weMicrosoft akatumirawo humbowo hwepfungwa yechinhu chekutsvaga chinowanikwa:
Sezvauri kuona muiyo GIF iri pamusoro, zano nderekusvibisa skrini rako uye nekukwiridzira iyo inotora kana iwe uchizunza mbeva yako kutenderedza sikirini, iyo inoita kuti iwe ukurumidze kutsvaga chako chitupa.
Iyi ficha ichave yakavakirwa pa Windows 10'' UWP skrini inotora maAPI.
Parizvino, hazvisi pachena kuti tinotarisira riini nyowani mbeva yekuwana yekuwana, asi hazvigone kusvika gore rino. Izvi zvinodaro nekuti Microsoft parizvino iri kushanda pazvigadziriso zvebug zvePowerToys app uye kambani yakambomira kusimudzira kwekuwedzera kutsva.
Kunze kweizvozvo, Microsoft iri kushanda zvakare pane nyowani screen rekodhi uye font kupa shanduko kuti ugadzirise yako Windows ruzivo.
The post Windows 10 inogona kunge iri kuwana macOS-senge tsvaga chinongedzo chimiro yakatanga kutanga Windows tsva
Maoko kuenderera nePowerToys nyowani - maitiro ekuwana zvakanyanya kubva paPC yako
Microsoft Yakabudiswa PowerToys 0.18.2
Microsoft Yakaburitsa PowerToys 0.16.1 ine Bug Fixes
Maitiro ekuwedzeredza ako Windows 10 ruzivo nePowerToys
Tora Mouse yako mu Laser Pointer mu PowerPoint